Taliye ku-xigeenka seddaxaad ee booliska Puntland oo lagu dhaawacay magaalada Boosaaso – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliye ku-xigeenka seddaxaad ee booliska Puntland oo lagu dhaawacay magaalada Boosaaso
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in koox hubeysan ay maanta magaaladaasi toogasho ku dhaawaceen taliye ku-xigeenka seddaxaad ee ciidanka booliska maamulka Puntland, Jaamac Saxardiid Cabdi.
Kooxahaasi ayaa taliye ku-xigeenka dhaawacay xilli uu kasoo baxayey hoteelkii uu ka deganaa magaalada Boosaaso islamarkaana kusii jeeday goobtiisa shaqo.
Dhaawaca taliye-xigeenka ayaa la sheegayaa inuu yahay mid aad u culus, waxaana dhaawaciisa la dhigay isbitaalka weyn ee ku yaala magaalada Boosaaso.
Kooxdii weerarkaasi ka dambeeyay ayaa islamarkiiba goobtaasi isaga baxsaday, waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidanka ammaanka magaalada Boosaaso, oo halkaasi ka sameeyay baartitaano ay ku baadi goobaayaan kooxihii falkaasi ka dambeeyay.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan loo soo qabtay falkaasi lagu dhaawacay taliye ku-xigeenka seddaxaad ee ciidanka booliska maamulka Puntland Jaamac Saxardiid Cabdi, waxaana la sheegayaa in xilligii la dhaawacaayay taliye ku-xigeenka aanu la socon wax ilaalo ah.
Weerarkaasi ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay jidka dheer ee hormara garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso, waxaana haatan goobtaasi ku sugan ciidanka ammaanka oo howlgalo baaritaan ah halkaasi ka wada.